Chinja vhidhiyo kuva MP4 kune DVD uye DVD ku MP4 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Vazhinji vashandisi pakati pe2000 na2009 vakanyora nhamba hombe yemabhizimusi emabhizimusi maDVD kana maimba dhizaini, ayo anogona kutariswa zvakanaka achigara pasofa neakakosha mutambi. Mumakore anotevera, kushandiswa kwakawanda kwenzvimbo dzekushambadzira uye mapuratifomu anotakurika kwakadzora zvakanyanya tsika iyi, zvichitungamira kumaDVD kuunganidza guruva mune mamwe madhirowa.
Kana tichida chengetedza mavhidhiyo arimo paDVD kudigital faira kana zvinopesana (tora MP4 kuDVD), mugwara rino tinokuratidza zvirongwa zvese zvemahara zvakagadzirirwa izvi zvinodiwa, kuitira kuti ugone kutonga pamusoro pezviri mumaziso uye zvaunofanira kuchengeta uye zvekurasa.
VERENGA ZVIMWE: Sei chinja vhidhiyo uye DVD ku MP4 kana MKV paPC neMac
Maitiro ekushandura DVD mavhidhiyo kuita MP4 (uye Vice Versa)
Muzvitsauko zvinotevera tichakuratidza mapurogiramu emahara atinogona kushandisa pakombuta yedu kushandura DVD Vhidhiyo optical discs kuva MP4 mavhidhiyo mafaira uye zvinopesana (wobva wagadzira DVD Vhidhiyo kubva kune imwe kana kupfuura MP4). Mapurogiramu ese anogona kushandiswa pasina nguva kana miganho pahukuru hwemafaira kana DVD kuti igadziriswe, kuitira kuti tichengetedze kutengwa kwemapurogiramu anodhura uye asisashandiswe.
Zvirongwa zvekushandura DVD kuita MP4
Chirongwa chekutanga chatinokurudzira kuyedza dhijitari DVD kutendeuka iBrandBrake.
Kuti ushandise chirongwa ichi, isu tinotanga taisa iyo DVD mune mutambi, mira maminetsi maviri, wobva watanga chirongwa uye sarudza DVD player kurodha vhidhiyo.
Kamwe kana vhidhiyo yacho yaiswa kune iyo interface, tinotarisa kuti ndeipi vhidhiyo uye odhiyo makwara ekuchengetedza, isu tinosarudza kuti sei Format chimiro MP4, tinosimbisa se Preset izwi 576p25 tobva tadhinda kumusoro Kutanga kuodha.
Seimwe nzira inoshanda kuBrandBrake tinogona kushandisa iyo VidCoder chirongwa.
Mune yakapusa interface tinokwanisa kurodha zvirimo mune chero DVD Vhidhiyo, sarudza maodhiyo nemavhidhiyo maturu ekuchengeta, sarudza kuti ubatanidze zvinyorwa zvidiki, sarudza shanduko yekushandura (mune Encoding marongeros) uye pakupedzisira shandura diski ive MP4 faira nekudzvanya Shandura.
Kana pachinzvimbo cheMP4 mafaira isu tinoda kuchengetedza DVD Vhidhiyo muMKV (nyowani fomati uye inoenderana ne Smart TV), tinogona kushandisa yemahara uye inoshanda chishandiso senge MakeMKV.
Iyo yakapusa chirongwa yekushandisa kushandura DVD kuita dhijitari vhidhiyo mafaera haipo: kuishandisa isu kuvhura chirongwa, sarudza iyo optical disk kubva kwaunotora iyo vhidhiyo, sarudza nzira dzekuchengetedza, sarudza nzira yekuchengetedza iyo nyowani faira wobva wadzvanya. Gadzira MKV kukonzera kutendeuka.
Kana iwe uri wekutanga uye usingakwanise kushandisa HandBrake uye VidCoder, ichi ndicho chirongwa chako!
Chinja DVD yakachengetedzwa
Kana isu tichiedza kushandisa maviri ekutanga mapurogiramu akakurudzirwa pamusoro neDVD yakachengetedzwa, isu hatizokwanisa kushandura kuita MP4, yaonekwa iyo anti-kopi dziviriro yakavakirwa mune yekutanga midhiya pamusika. Iyo yega ine system inobvisa zvinodzivirirwa ndeyeMakeMKV, asi neimwe nzira isu tinogona zvakare kushandisa imwe yezvirongwa zvaunoona mugwara redu Iwo mapurogiramu akanakisa ekuteedzera DVD (rip) kuPc.
NOTA: Kubvisa zvinodzivirirwa kuti ugadzire wega makopi haisi mhosva, chinhu chakakosha ndechekuti makopi haatombosiya imba yedu (hatigone kuagovera kana kuatengesa).
Zvirongwa zvekushandura MP4 kuita DVD
Kana, kune rumwe rutivi, tichida chirongwa chekuunza MP4 kuDVD Vhidhiyo (saka inowirirana neDesktop DVD players), tinokurudzira kuti uedze Freemake Video Converter ipapo.
Kuti uishandise, isa DVD isina chinhu mune rekodhi, tanga chirongwa, tinya bhatani. Video kurudyi kumusoro, sarudza iyo MP4 mafaera kuti uchinje, tinya bhatani muDVD iripo pazasi uye pakupedzisira simbisa mukati Pisa. Muhwindo rimwe chete tinokwanisa kusarudza kuti tigadzire DVD menyu uye nemhando yekutendeuka, kunyangwe iwo ma parameter ekutanga akakwana kuita mavhidhiyo akanaka eDVD.
Chimwe chirongwa chakanakisa chekushandura MP4 kuita DVD ndeye AVStoDVD.
Nechirongwa ichi tinogona kukurumidza kushandura MP4 mavhidhiyo kuita fomati inoenderana neDVD Vhidhiyo, kuitira kuti tikwanise kupisa ipapo disc yedisiki. Kuti uwedzere mavhidhiyo, ingotinya Vhura, tichitanga nzira yekutendeuka tinodzvanya bhatani tanga.
Kana iwe uchitsvaga chirongwa chakazara uye chakapfuma-kuunza MP4 kuDVD, tinokukoka iwe kuti uedze DVD Author Plus.
Nayo, unogona kurodha ipapo ese mafaera eMP4P kubva kune yakavakirwa-mukati folda muti pasina kuvhura iyo maneja maneja nguva yega yega kupedzisa yekupedzisira Optical disc disc. Kana zvedu Nyaya yebhodhi inoratidzwa pazasi yakwana, seta maDVD parameter muchikamu chekona chehwindo, rova ​​Zvinotevera kumusoro uye pedza mashandiro anopisa.
Kuti uwane mamwe mapurogiramu anobatsira ekushandura MP4 kuita DVD, verenga yangu gwara re chinja MKV kuAVI kana kupisa MKV kuDVD.
Nemapurogiramu akanyorwa pamusoro apa tichakwanisa kuita marudzi ese ekushandurwa kubva kuMP4 kuenda kuDVD uye kubva kuDVD kuenda MP4, kuitira kuchengetedza macomputer discs edu ekupfeka uye kubvarura mafirimu uye panguva imwechete kugadzira maDVD ekupa kune vedu vakura hama kana kuva nazvo. yevekare maDVD players achiri kushanda.
Mune rimwe gwara takakuratidza mamwe mapurogiramu ku chinja DVD kuva MP4 kutarisa mavhidhiyo pane iPhone, kuitira kuti mavhidhiyo (kubva kuDVD) aenderane neyakavakirwa-mukati mutambi pane iyo iPhone.
Kana pachinzvimbo isu tingade kushandura mavhidhiyo kuti uatarise paApple, tinokuendesa iwe kumutungamiriri wedu Chinja mafirimu nemavhidhiyo ekuona pane smartphone.